China Outdoor nguSihlalo ziphene Inaliti zomngundo mveliso kunye nabenzi HEYA
Izitulo Zangaphandle Zesitulo zeSitulo soMngundo phantsi kweSitulo Sangaphandle Sokungunda Inaliti. Ngokweendlela ezahlukeneyo zemveliso, uSomlomo weSihlalo unokuhlulwa kwisitayile sendabuko kunye nesitayile esenziwe ngokwezifiso, ezinje ngesitulo sokubumbela isitulo seplastikhi, ukungunda kwesitulo sangaphandle, isitulo sokubumbela isitulo seplastikhi, ukusonga isitulo somenzi wenkunkuma, njl.
I-Taizhou Heya Mold Co, Ltd ilandela ingqokelela yobugcisa kunye nokunyaniseka, inika ingqalelo ekubambeni nasekunyangeni kweenkcukacha zikaSihlalo, kwaye izama ukubonelela abathengi ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezifanelekileyo.
Sinyanzelisa imveliso ngentliziyo, inkonzo yehlombe, uncamathisele ukubaluleka ekudalweni zonke link imveliso, ukufuna uphuhliso kunye nobuchwepheshe, ukufuna abathengi kunye nomgangatho, kwaye ikunike nezisombululo ezifanelekileyo imveliso sokubumba.
Siza kukubonelela ngesicwangciso sokukhuphisana ngokuhambelana nemveliso kunye neemfuno zokubumba.
Sijonge ukusebenza nawe ukwenza ikamva eliqaqambileyo.
Igama lemveliso USihlalo Inaliti Inaliti zomngundo
Umbuzo: Uyithumela njani isampulu yovavanyo? isimahla okanye yongezelelweyo?
A: I-Heya Mold iya kuthumela isampulu yovavanyo yi-DHL, i-UPS, i-EMS, i-FEDEX okanye i-TNT.
Q: njani malunga nolawulo lwakho lomgangatho?
A: I-Heya Mold ineqela leengcali lokulawula umgangatho wokungunda, kwaye siyakholelwa ukuba ulawulo lomgangatho ngowona ndoqo uphambili wokuqhuba ishishini.
Q: Loluphi uhlobo lwenkqubo yokubumba oyisebenzisayo?
A: Heya zomngundo uzilungiselele ngokwemfuno zakho kunye nokuvunda ezithile, ukuqhubekekisa umphezulu womngundo njenge: isipili ipolishi; Ubugcisa; Unyango Chrome nesingxobo kwi engundoqo kunye kwisisu; Nitride & unyango ubushushu ezincamathelayo
Q: Uyazivuma njani iisampulu?
A: Ungafika kumzi-mveliso wethu ukuze ube novavanyo lokungunda ngqo, kunye no-Heya Mold baya kuthumela iisampulu kunye nevidiyo ebalekayo kuwe.
Q: Imiqathango Intlawulo
A: 50% T / T kwangaphambili, kunye nokulinganisela phambi kokuba zithunyelwe.
Egqithileyo Usihlalo wePlastiki
Okulandelayo: USihlalo Inaliti zomngundo